Tiicey:-“Sharciga ayaan La Tiigsan Doonaa Kuwii aan u Xirnaa 4 sano iyo Laba Bilood”, – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Tiicey:-“Sharciga ayaan La Tiigsan Doonaa Kuwii aan u Xirnaa 4 sano iyo Laba Bilood”,
Madaxweynihii hore ee Maamulkii Ximan Iyo Xeeb, Maxamed Aaden Tiiceey oo muddo 4 sano iyo laba bilood ah ku xirnaa xabsi ku yaalla Wadanka Belgiumka oo todobaadkan bartankiisii xabsiga laga sii daayay, ayaa waxa uu habeenkii xalay ahaa dib ugu laabtay magaalada Minneapolis oo uu ka mid ahaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee halkaas mudada ku noolaa.
Maxamed Tiiceey ayaa xabsi la galay sanadkii 2013-kii Maxamed Cabdi Xasan (Afweyne) oo mar madax u ahaa kooxihii burcad badeeda ee ka hana qaaday Gobolada Dhexe ee dalka Soomaliya, kaasoo loo haystay in uu ka masuul ahaa markab laga leeyahay dalkaasi Belgium-ka oo madax furasho loogu haystay Gobolada Dhexe.
Dacwad oogayaasha, ayaa Mudane Tiicey ku soo oogay in maamulkiisii uu la macaamil la lahaa burcad badeeda Soomalida, isla-markaana uu gabaadsiin jiray, intii uu ahaa Madaxweynihii Maamulkii Ximan & Xeeb.
Maxkamad hubisa xukunada ay Maxkamadaha kale ridaan oo markii dambe dib u eegis ku sameysay xukunka Tiicey, ayaa fadhiyo badan ka dib ogaatay inaanu ku lug lahayn wixii lagu soo eedeeyay, iyadoona ugu dambeen amartay in dib xoriyadiisa loo siiyo Madaxweynihii hore ee Maamulkii Ximan Iyo Xeeb, Maxamed Aaden Tiiceey.
Sidoo kale Madaxweynihii Hore ee Maamulkii Ximan Iyo Xeeb ee Gobolada Dhexe Maxamed Aaden Tiiceey ayaa sheegay in uu sharciga la tiigsan doono kuwii ka dambeeyay in uu xabsi galo muddo 4-sano iyo labo bilood ah.
Madaxweynihii hore ee Maamulkii Ximan Iyo Xeeb ee gobolada Dhexe ee dalka Soomaliya, Maxamed Aaden Tiiceey ayaa mudadii uu xabsiga ku jirey waxaa Gobolada dhexe ka sameysan maamulka Galmudug.